भाषा! Japanese चीजहरू याद गर्नुपर्दा जापानी मानिसहरुसँग कुरा गर्दा - Best of Japan
सेतो जापानी स्पिट्ज चश्मा = शटरस्टकको साथ पुस्तक पढ्दै
धेरै जापानी मानिसहरु अ using्ग्रेजी प्रयोग गर्न राम्रो छैन। यस कारणले, जापान आउने मानिस जापानी मानिसहरुसंग राम्रो कुराकानी गर्न सक्दैनन्। विदेशीहरू कहिलेकाँही सोच्दछन् कि कसरी हराउँदछ वा जानकारीको आवश्यक पर्दा कसैलाई कसरी सोध्ने। जब तिनीहरू एउटा सानो शहर वा गाउँ जान्छन् तिनीहरू सजिलैसँग रेस्टुरेन्ट वा रेस्टुरेन्टमा व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सक्दैनन्। जापान मा, तपाईं जापान मा मानिस संग कुरा गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ? म निम्न तीन चीजहरूको सिफारिश गर्दछु।
कागजमा पत्र लेख्नुहोस्
अनुवाद सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस्: गुगल, पकेटल्क, इली आदि।
सिफारिश गरिएका भिडियोहरू: जापानमा सञ्चारको आनन्द लिनुहोस्!
जब तपाइँ पहिलो पटक जापानी व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई थाहा हुँदैन, तपाईंले पहिले निम्न जापानी वाक्यांश प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
अंग्रेजीमा यससँग मिल्दोजुल्दो अर्थ छ "माफ गर्नुहोस्" वा "माफ गर्नुहोस् (तपाईंलाई कष्ट दिन)"। जापानी भाषामा, यो वाक्यांश धेरै जसो प्रयोग गरिन्छ। "Sumimasen" पनि "धन्यवाद" को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा पसल वा रेस्टुरेन्टमा सहयोगको लागि कल गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो वाक्यांश एकदम उपयोगी छ जब तपाईं कसैको ध्यान पाउन चाहानुहुन्छ।
सामान्यतया, जापानका मानिसहरु अ speaking्ग्रेजी बोल्नमा राम्रो गर्दैनन्। जे होस्, यदि तपाइँ एक जापानी व्यक्तिलाई "Sumimasen" भन्नु हुन्छ तिनीहरू रोकिनेछन् र तपाइँको कुरा सुन्नेछन्। जापानी मानिसहरु दयालु र विदेशी मानिसहरुलाई स्वागत छ त्यसैले कृपया "Sumimasen" प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईंलाई मद्दत चाहियो भने। कसैलाई पनि सुन्नु भएकोमा धन्यवाद दिन नबिर्सनुहोस्। चिन्ता नलिनुहोस्। जापानी मानिसहरु अंग्रेजी मा "धन्यवाद" भन्न कसरी बुझ्छन् ताकि उनीहरु तपाईको कृतज्ञता बुझ्नेछन्।
जापानीहरु लजालु छन्, तर जब तपाईं समस्यामा हुनुहुन्छ, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्नेछौं। = शटरस्टक
जापानी भाषामा कसैसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दा तपाईको प्रश्नलाई कागजमा लेख्नु फाइदाजनक हुन सक्छ तपाईसँग कुरा गरिरहेका कसैलाई पनि देखाउन। उदाहरण को लागी, एक सरल वाक्य लेख्नु जस्तै "Shibuya स्टेशन कहाँ छ?" वा "यो ट्रेन गिन्जा जाँदैछ?" कसैलाई तपाईको कुराको प्रयास गरिरहेको भन्दा राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ।
अधिकांश जापानी वयस्कहरू सरल वाक्यहरू पढ्न सक्दछन् जब उनीहरू यस तरीकाले लेखिएका हुन्छन्। तपाईं एक अर्को साथ साधारण तस्वीर वा नक्शा कोर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ चिनियाँ क्यारेक्टरहरू लेख्न सक्षम हुनुभयो भने तपाइँ सञ्चारको त्यो तरीका पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंको प्रश्नहरूको साथ चिन्ता लिदैनौं त्यसैले कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्!
अनुवाद अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरौं
जब तपाईं जापान आउनुहुन्छ कृपया जापानी मानिससँग कुरा गर्नुहोस् जब तपाईं सक्नुहुन्छ। सुविधाको लागि, तपाईं एक साधारण अनुवादन सेवा प्रयोग गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ दुईवटा सेवाहरू छन् जुन म सिफारिस गर्न सक्छु।
पहिलो, गुगल अनुवाद, एक अनुवाद अनुप्रयोग हो। यात्रा गर्नु अघि तपाईं यो अनुप्रयोगलाई तपाईंको स्मार्टफोनमा राख्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं जानुहुन्छ र सहयोगको आवश्यक हुन्छ।
धेरै अनुवाद अनुप्रयोगहरू आफैंले प्रयोग गरेपछि मैले फेला पारे कि माइक्रोसफ्ट ट्रान्सलेटर अर्को सेवा हो जसले अ and्ग्रेजी र जापानी बीच सही अनुवाद गर्न सक्छ
>> गुगल अनुवाद अनुप्रयोगमा विवरणहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
>> माइक्रोसफ्ट ट्रान्सलेटर अनुप्रयोग को विवरण को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
साना अनुवाद मेशिनहरू पनि उपलब्ध छन्
दोस्रो सेवा मैले सिफारिस गर्न सक्दछु सानो अनुवाद मेसिनको प्रयोग। यी उपकरणहरूले तपाईंलाई यसमा बोल्न अनुमति दिन्छ र तपाईंलाई वास्तविक-समय अनुवाद दिन्छ। म निम्न दुई सिफारिश गर्न सक्छु:
>> "पॉकेटलक" को विवरणहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
>> "ili" को विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
यी अनुवादकहरू जापानमा वाइफाइ राउटरहरूको लागि भाडाका पसलहरू द्वारा ह्यान्डल भइरहेका छन्। तल यी मध्ये एक भाँडा पसलको उदाहरण हो।
>> "निन्जा वाइफाइ" को विवरणहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
>> "टोक्यो स्पीड वाइफाइ" को विवरणहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
जापान आउनु भन्दा पहिले यो कुराकानी गर्नु राम्रो हो कि तपाईले कसरी संवाद गर्न चाहानुहुन्छ भनेर योजना बनाउनुपर्दछ यदि तपाईंलाई कहिले पनि आवश्यक पर्दछ भने।
फेरि, जापानी मानिस धेरै मैत्री छन् र तपाईले गर्न सक्ने कुराकानी गर्न खुसी हुन्छन्।